DEG DEG: Al Shabab oo isaga baxay Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo iyo Dagaal culus oo beledxaawo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 21 July 2015 22 July 2015
Baardheere (Mareeg)—Wararkii ugu dambeeyay ee Magaalada Baardheere ee Gobolka ayaa sheegaya in Dagaal yahanada Ururka Al Shabaab ay isaga baxeen Degmada Baardheere Xili Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay halkaasi u jiraan wax ka yar 30 Kiiloomtir.
U qaabilsanaha Ururka Al Shabaab Gobolka Gedo, Fiiloow oo meel fagaaro ah kula hadlayay boqolaal ka tirsan Dadka Degaanaka ayaa sheegay in Dagaal yahadooda ay isaga baxayaan Degmada Baardheere oo 7 Sanno ay ka talinayeen.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Midowga Africa ee AMISOM ayaa u jira Magaalada Baardheere 30 Kiiloomitir waxaana laga yaabaa in Barri oo Arbaco ah ay galaan Magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in Al Shabab ay wadooyinka intooda badan ay ku aaseyn Miinooyinka Taangiyada iyo kuwa kale oo fara badan, sida Dadka Degaanka ay u sheegeen Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho.
Dagaal yahanada Ururka Al Shabaab ayaa la sheegayaa in ay u ruqaansadeen Degaano ka tirsan Gobolka Jubada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya.
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ay wadaan duulaan militari oo ay ku doonayaa in ay ku hantaan Degmooyinka Baardheere iyo Diinsoor ee Gobolada Baay iyo Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.
Ciidamada DFS iyo Al Shabaab oo Dagaal Culus ku dhexmaray Duleedka Degmada Baladxaawo
Dagaalkan oo ahaa mid Culus ayaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Al Shabaab waxuu ku dhexmaray Duleedka Degmada Baladxaawo ee Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.
Dagaalkan ayaa sida la sheegay waxuu ka dambeeyay kadib markii Koox ka tirsan Al Shabab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen Kolonyo ay la socdeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo marayay Degaan lagu magacaabo Farwaaley oo Duleed ka ah Degmada Baladxaawo.
Goobjooge ayaa sheegay in Dagaalka uu ka dhashay Khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan khasaaraha dhabta la cayimin.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Gaadiid Dagaal la kala qabday inta uu sacday Dagaalka labada dhinac halkaasi ku dhexmaray.
Ugu dambeyn, Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in 7 Degmo oo ka tirsan Gobolka Gedo ay caawa ka maqan tahay Isgaarsiinta waxaana adag in la ogaado khasaaro dhimasho iyo midka dhaawac ee soo kala gaaray labada dhinac.